မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ပြန်စမှာ စိုးရိမ်နေကြ - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ပြန်စမှာ စိုးရိမ်နေကြ - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ 5
ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ - ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉
အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့ မြစ်ဆုံဆည် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ပြန်ဖော်ဆောင်ဖို့ တရုတ်ဘက်က ခြေလှမ်းပြင်၊
ပါကစ္စတန်က ခေါင်းချင်းဆက် အမြွှာ ဆာဖာ နဲ့ မာဝါတို့ကို လန်ဒန်မြို့က Great Ormond Street ကလေးဆေးရုံမှာ ဒီအမွှာ လေး ၂ ယောက်ကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ် ပေးနိုင်
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရော့ဒရီဂို ဒူတာတေ က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေ တရပ်ကို ထုတ်ပြန်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီနေ့ စတင်အသက်ဝင်မယ့် ပိုမိုတင်းကြပ်ထားတဲ့ ခိုလှုံခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ ပြော
တောင်ကိုရီးယား မှာ အလုပ်ခွင်အတွင်းအနိုင်ကျင့်မှု တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့ ကိစ္စတွေမှာ ထောင်ဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသန်းပေါင်း ၈၂၀ ဟာ အစားအစာ လုံလုံလောက်လောက် မရရှိကြဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂပြော
#မြစ်ဆုံဆည် #ဧရာဝတီ #တရုတ် #ခေါင်းချင်းဆက် #အမြွှာ #လန်ဒန် #ဖိလစ်ပိုင် #တောင်ကိုရီးယား #အမေရိကန်
မ​အေးလိုးတရုတ်​ Fuck China လီးပဲ မြစ်​ဆုံစဖို့ပြင်​ဆင်​​နေ Fuck China fuck you😡😡😠😠 🖕🖕🖕🖕
စစ်တပ်ကကောင်တွေကတော့ ချမ်းသာသွားပြီး ဒူးနန့်နေတယ် ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေကြရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ
Author — hight light
ဗီယနံ ဆို တ၇ုပ်က စည်း၇ုံးတာ အဟုက်ထင်ပီး လက်ခံလိုက်တာ မြစ်ကမ်းဘေး ၇ွှာတွေ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ ဒုခေ၇ာက်သွားကြတယ်ေ၇က သောက်လို့မ၇ အပင်တွေလောင်းတော့လည်း အပင်တွေ က အ၇င်လို့ကြည့ထွားမလာတော့ဘူး လုံးဝ ကန့်ကွပ်တယ်
Author — kyaw zin kyaw
သဘေားလုံးဝ မတူဘူးအမေစု လည်း သဘောတူ၇င် နိုင်ငံခြားပဲပြန်သွားနေတော့
ပြည်သူတင်ပေးထားသော အစိုးရ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကို မြင့်တင်ပေးပါ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုကြည့်ပါ .တောင်းဆိုတာပါ။
Author — Myo Thura
Do not make it with chain if you can able to do, do my you self
Author — Yuu Ki
ဒီတယုတ်ကတော့ ကိုယ့်အကျိုးပဲ ကြည့်နေတယ်။ကြည့်ထား မကြာမီ ယုတ်ညစ်တဲ့စိတ်က ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှ တည့်မှာမဟုတ်ဘူး
Author — Steven Muang
လျှပ်​စစ်​မီးရဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိတယ်​ တရုတ်​​တွေက မြန်​မာနိုင်​ငံကို မြန်​မာမှာ စီးပွားလာလုပ်​ ပြီး​တော့ မြန်​မာပြည်​သူ​တွေ အနိုင်​ကျင့်​မယ့်​ဟာ​တွေ
Myanmar will get onlyalittle power and China will get more revenue? No thanks and they are even planning to do more? No I say no to it at all.Wait till I become 18 and got my citizen card and I will willingly vote NLD out if they start that project😶
ဘက်ထရီနဲ့ မောင်းတဲ့ သင်္ဘောကြီး - ဘီဘီစီ ကလစ် နည်းပညာ
ဖားကနျ့ ဝှခေါမှျောက အမြှဝပှေဲ - BBC News မွနျမာ
အနိမျ့ဆုံးလခနဲ့ မွနျမာ စကျခြုပျသမတှရေဲ့ ဘဝ - BBC News မွနျမာ
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၇-၁၃-၂၀၂၀)
Mizzima TV Updates ( 14.07.2020 )
သမ်မတနဲ့အတိုငျပငျခံ ပါတီစညျးရုံးရေးလုပျသငျ့လား- BBC News မွနျမာ
ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ ဘယျလောကျမြှျောလငျ့ထားသလဲ - BBC News မွနျမာ
အိမျထောငျတာဝနျ၊ သားသမီး တာဝနျတှကွေားက အိမျထောငျရှငျ အလှမယျ - BBC News မွနျမာ
ဟောင်ကောင်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်အောင် အနောက်အုပ်စုတွေ မြှောက်ပေးနေတယ်လို့ တရုတ်ပြော
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးသနျးရှနေဲ့ ဆငျတဲ့ဆငျးတု အပါအဝငျ ယတွာဆငျးတုတှေ ဘာကွောငျ့ ပွငျသလဲ - BBC News မွနျမာ...